काठमाडाै । अाजदेखि एक महिनाको लागि रसुवागढी नाकाबाट व्यापारीक कारोबार बन्द हुने भएको छ । फागुन ४ गते पर्ने ग्याल्पो ल्होसार (अर्थात चिनियाँ नयाँ वर्ष) का कारण केरुङ भन्सारले एजेन्टले कन्टेनरमा शिल नगर्ने भएपछि एक महिनाको लागि रसुवागढी नाकाबाट व्यापारीक कारोबार नहुने भएको हो ।
रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल कोइरलाका अनुसार फेब्रअरी १२ तारिक देखि मार्च ६ सम्म केरुङमा रहेको प्राइभेट ट्रन्सपोट बन्द हुने भएपछि व्यापारीक कारोबार कम हुनेछ । भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवागढी नाका संचालन हुँदै आएको छ । चीनबाट हुने धेरैजसो आयात २०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको छ । रसुवागढी नाकालाई चिनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । रसुवागढी नाकाबाट दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी कन्टेनर आवतजावत गर्ने गरेको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४१५:४६
मोटरसाइकलाई बसले ठक्कर दिँदा २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु ! बसमा सवार सात यात्रु घाइते !
आफ्नै आमा र बहिनीको सहयोगमा १३ वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार !
“प्रधानमन्त्रीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्ने मूल मन्त्र छ…, राज्यविरोधी शक्तिसँग सजग रहौं”